Yakakwira-Kukwira Zvivakwa - China Zhenyuan Simbi Simbi Injiniya Inogadzira Co., Ltd.
Simbi mamiriro chivakwa rudzi rutsva rwehurongwa hwekuvaka, iyo inovhura miganho yeindasitiri pakati peindasitiri yezvivakwa, indasitiri yekuvaka uye indasitiri yesimbi uye inosangana neyakaumbwa indasitiri. Iyi ndiyo simbi yekuvaka sisitimu iyo inowanzo kufarirwa neindasitiri.
Zvichienzaniswa nezvakajairwa zvekongiri zvivakwa, zvivakwa zvesimbi zvinotsiva kongiri yakasimbiswa nemapureti esimbi kana simbi yechikamu, iyo ine simba rakakwirira uye zvirinani kudengenyeka kwenyika. Nekuti izvo zvikamu zvinogona kugadzirwa mufekitori uye kuiswa panzvimbo, nguva yekuvaka yakaderedzwa zvakanyanya. Nekuda kwekugadziriswa kwesimbi, tsvina yekuvaka inogona kuderedzwa zvakanyanya uye iri greener uyezvakatipoteredza zvine ushamwari, saka inoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa zveindasitiri nezvivakwa zveveruzhinji pasi rese. Parizvino, kuiswa kwezvivakwa zvesimbi muzvivakwa zvepamusoro-soro uye zvakakwirira-zvinowedzera kukura uye zvishoma nezvishoma inova tekinoroji yekuvaka, inova nzira yekuvandudza yezvivakwa zvemangwana.
Simbi simbi chivakwa chivakwa chinotakura mutoro chakagadzirwa nesimbi yekuvaka. Matanda, makoramu, trusses uye zvimwe zvinhu zvinowanzo gadzirwa nesimbi simbi uye mahwendefa esimbi anoita chimiro chinotakura mutoro. Inoita chivakwa chakazara pamwe nedenga, pasi, madziro uye zvimwe zvivakwa.
Chikamu chekuvaka simbi chinowanzoreva simbi inopisa yakakungurutswa, simbi yechiteshi, I-danda, H-danda uye pombi yesimbi. Zvivakwa zvine masheya-anotakura zvivakwa zvinoumbwa nezvinhu zvavo zvinodaidzwa kuti simbi mamiriro zvivakwa. Uye zvakare, dzakaonda-dzakakomberedzwa masimbi mahwendefa akadai L-zvakaumbwa, U-zvakaumbwa, Z-zvakaumbwa uye tubular, ayo ari kutonhora akakungurutswa kubva matete simbi mahwendefa uye vari crimped kana uncrimped, uye mutoro-kutakura zvivakwa zvivakwa zvakaumbwa navo uye zvinhu zvakagadzirwa yesimbi mahwendefa madiki senge kona simbi uye simbi mabara anowanzo kunzi mwenje simbi chivakwa chivakwa. Kune zvakare akarembedzwa tambo zvivakwa netambo dzesimbi, ayo ariwo masimbi masimbi.
Iyo simbi ine yakasimba simba uye yakasununguka modulus, yunifomu zvinhu, yakanaka mapurasitiki uye kuomarara, kukwirira kwakaringana, nyore kuisa, yakakwira degree rezvemabhizimusi uye nekukurumidza kuvaka.
Nekuvandudzwa kwenguva, pakati peanenge aripo matekinoroji uye zvigadzirwa, simbi mamiriro, seyakaremerwa-inotakura mamiriro ezvivakwa, yakagara yakave yakakwana uye yakakura, uye yakagara iri yakanaka yekuvaka zvinhu.
Zvivakwa zvinopfuura imwe nhamba yehuriri kana nzvimbo dzakakwirira zvichave zvivakwa zvepamusoro-soro. Kureba kwekutanga kana huwandu hwepasi pezvivakwa zvepamusoro-siyana zvinosiyana nyika nenyika, uye hapana mhedzisiro uye yakaoma mitemo.
Mazhinji acho anoshandiswa mumahotera, zvivakwa zvemahofisi, nzvimbo dzekutengesera uye zvimwe zvivakwa.
Chipatara Chemadzimai neMwana
Yunivhesiti Yakaomarara Chivakwa